Ma run baa in aamusnaantu ay faa`iido leedahay? - BBC News Somali
Ma run baa in aamusnaantu ay faa`iido leedahay?
Dhegeyso... dhawaq aan jirin
Waxaan ku nool nahay duni aysan ka marneyn dhawaq iyo sawaxan, balse maxaa dhacaya haddii aan helno degganaanta rasmiga ah?
dhawaqa taraafikada, codadka qeylada dheer, iyo dhawaqa telefoonnada ee baraha bulshada ka imaanaya ayaa dhammaantood noqon kara kuwo aan loo dulqaadan karin, balse weli sawaxan la`aan ayaa waxaa lala xiriiriyaa kelinnimo, caajis ama xitaa murugo.
"Waxaan ku nool nahay duni sawaxan ka jiro. Degganaantu way sii yaraaneysaa," ayuu yiri faylasuufka Erling Kagge.
Erling ayaa soo bandhigay awoodda aamusnaanta. Sidaas darteed, maxay tahay sababta aan ugu baahannahay aamusnaanta? sidee ayaana ku weynaa?
Sidoo kalena waxaa is weydiin mudan xaggee ayaan mar kale ka heli karnaa?
Aamusnaantu waxay naga caawineysaa inaan nafteenna ka war heyno
Ma joojin kartaa wax walba oo aad sameyneyso si aad u fekerto? Aamusnaanta ayaa malaha taas kaa caawin karta
"Antarctica waa meesha ugu deggan ee aan weligey arko," ayuu yiri Erling, "Waxaan noqday qof aad uga warqaba dunida uu ku nool yahay."
Dhammaanteen ma wada aadi karno meel geeri-go`an ah, balse waan heli karnaan fursad degganaan ah - ha noqoto qolka jiifka, ama meel gees ah oo beerta ku taalla - waxay naga caawin karaan inaan ka yara nasanno howlaheenna caadiga ah isla markaana aan la sheekeysanno nafteenna.
Erling ayaa aaminsan inaan dhammaanteen heli karno "degganaan gudaha ah" wuxuuna soo jeedinayaa "in la how fadhiisto dab baxaya, lagu dhex dabaasho haro meel keyn ah ku taalla, amaba socod dheer lagu qaato meel bannaan."
Aamusnaantu waxay na siineysaa fursad aan ku fekerno
Fekraddaada ugu wanaagsan waxay kugu soo dhici kartaa adoo filaneyn - nabadda iyo degannaantu waxay muhiim u yihiin inaad si hal-abuurnimo leh u fekerto
Aamusnaantu "waxay muhiim u yihiin fekerka wanaagsan," ayuu leeyahay Erling, sayniska ayaana arrintaasi ku raacsan.
Xitaa haddii uusan jirin dhawaaq, maskaxdeennu waa mid firfircoon oo shaqeyneysa.
Cilmi-baaris ay sanadkii 2001 sameeyeen dhaqaatiir neerfayaasha ku takhasusay ayaa sheegeysa in maskaxda iyadoo xitaa nasaneysa ay ku howlan tahay dhuuxidda warbixinnada iyo qiimeyntooda.
Aamusnaantu waxay aalad awood leh u tahay wada hadalka
Inaad ogaato xilligaad hadleyso iyo waxaad oran lahayd ayaa ka wanaagsan inaad iska daldalanto
"Aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxannada ugu wanaagsan ee wada-hadalka" .
Wada-hadalka ama doodaha, way fududdahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta - balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan.
Markaad yara hakato, waxaad awoodeysaa inaad si deggan oo macquul ah u hadasho.
Markaad aamusto, si dabiici ah ayaad wax u dhegeysaneysaa waxaadna dadka kale siineysaa fursad ay ku sheegaan waxa ay hayaan.
Aamusnaantu waxay maskaxdeenna ka caawineysaa inay korto
Aamusnaantu waxya muhiim u tahay maskaxda
Sanadkii 2013, khabiir dhanka bayolojiga ah Imke Kirste ayaa tijaabiyay saameynta uu sawaxanku ku leeyahay maskaxda jiirka.
Natiijadu waxay ahayd mid cajiib ah: Sawaxanku ma lahayn saameyn, balse labo saacadood oo aamusnaan ah ayaa saameyn ku yeelatay koboca unugyada hippocampus - oo ah qayb ka mid ah maskaxda oo xusuusta qaabilsan.
Aamusnaantu waxay kaa caawineysaa inaad ka nasato baraha bulshada
Ka feker dhammaan waxyaabaha aad qaban lahayd haddii aad saacado kooban ka nasato baraha bulshada
"Buuqa shaashadaha iyo kumbiyuutarrada waa kuwo lala qabsado," ayuu yiri Erling.
Balse intii aan qanacsanaan ka heli lahayn, sawaxanka ka dhasha aaladahaas waxaa laga yaabaa inay kugu dhaliyaan walbahaar iyo dareen xun. Waxaa laga yaabaa inaan ku foognaanno baraha bulshada, balse micnaheedu maaha inaan faraxsannahay.
Isku day inaad ka yara nasato internet-ka si tartiib tartiib ah, ilaa aad kala qabsato inaad telefoon la`aan ahaato maalintii oo dhan - inaadan maqlin wax dhawaq ah oo telefoonkaaga ka baxaya ayaa kaa dhigi kartaa qof faraxsan.
Aamusnaantu waxay wax ka tartaa walbahaarka
Aamusnaanta iyo nasashadu waxay muhiim u yihiin caafimaadkeenna, waxtarkeenna iyo inaan si wanaagsan u fekerno
Florence Nightingale oo kalkaaliso ah, ayaa sheegtay in buuqa aan loo baahneyn uusan u wanaagsaneyn bukaannada. Waxay kalkaalisadu sheegtay in sawaxan walba oo aan loo baahneyn uu dhibaato u keeni karo bukaannada soo roonaanaya.
Cilmi-baaris ayaana taageertay aragtida kalkaalisada: waxaa jira xiriir ka dhaxeeya dhiig-karka iyo sawaxanka waddooyinka iyo garoomada diyaaradaha.
Caafimaadka maskaxda iyo inaan lahaatid xiriir jacayl ayaa keena farxad ka badan midda ay keento lacagta badan, ayay heshay daraasaad la sameeyay.